Ngabe u-André Hazes waphuka ngoba uBridget Maasland wayekopela kuMartin Vrijland? : UMartin Vrijland
ahanjiswe IZINDABA IZIMPENDULO	by UMartin Vrijland	ngo-19 February 2020	• 3 Amazwana
Ubudlelwano phakathi kuka-André Hazes Jr. futhi uBridget Maasland muhle impela wagcwalisa imithombo yezindaba nsuku zonke futhi namanje uthokozisa abaningi. Kungenzeka ukuthi lokhu kuzoholela ekwandeni okukhulu kwamalungu akhokhelwayo we-Telegraaf futhi umagazini we-Privé uzowuthengisa nangamakhekhe ashisayo. Ubudlelwano obuphakathi kukaMarco Borsato noLeontine Borsato-Ruiters ngokungangabazeki buyumkhiqizi omkhulu wemali engenayo. Simane sibheke kubo bonke labo bantu abaziwayo abangamaDashi futhi kumnandi ukudla lapho kunobunzima kulolo budlelwano.
Kwakuyi-adventure phakathi kuka-André noBridget. Kungenzeka ukuthi akuzange kulimaze ukuthengiswa kwamathikithi kaDré futhi yize uMarco Borsato eshaqekile futhi kufanele alulame kulo lonke usizi, ungasho ukuthi amathikithi ekhonsathi lakhe elilandelayo nanoma iyiphi i-albhamu entsha, enjenge-sandwich eshisayo hamba phezu kwekhawuntari. Uma u-André kungekudala ezokhipha ingoma lapho ehlabelela khona umuntu athandana naye noBridget, lokho kuzoba ngesidingo esikhulu.
Cha, kusobala ukuthi isizathu sangempela sokuthi uBridget no-André bahlukane akusikhona ukuthi wayekopela kuMartin Vrijland. Izihloko ezinomsindo, kepha, zihlala zisebenza kahle. Isizathu sangempela ukuthi iBridget yeqise ngokwedlulele uhlukunyeziwe ezinkundleni zokuxhumana, ukuthi akasayidonsanga.
Ukuthi uBridget kwenzeka esebenza emithonjeni yezindaba nokuthi izinkanyezi zingaletha kalula nje ukwenza okungezukukhulisa inzuzo yamakhonsathi abo nokuthengiswa kwama-albhamu, yinto eyodwa, kepha kungumqondo wobumbano ukuthi nabo bangadlala indima ekuletheni imithetho emisha.
Ngamanye amagama: yonke into eyenziwe nguBridget no-André bekungaba yinto enhle yokubamba iqhaza, enikeze abagqugquzeli imali edingekayo yokufeza inhloso ephakeme.
Ngiyaqonda. Ngokungangabazeki uzongitholela umcabango wobudlova obumbumbulu, kepha ngingacabanga ukuthi maduze nje sizovinjelwa ukufungiswa ngenxa yeBridget eqalekisiwe. Ngokwenza njalo, kumele sigcine ngokubhekisisa encazelweni yokufunga. Lokho kungahle kube yinto emigqeni yezinyathelo zokujezisa ku 'Ngizwa ubuhlungu'. Ngaphezu kwalokho, ukugxila kuzoba cishe "ekuphawuleni ngokobulili" futhi wonke umuntu uyakuqonda lokho, ngoba uBrgetget ompofu uxoshwe othandweni bakhe bokuqala no-André futhi manje sekumele ambhekele ebuyela embhedeni wakhe noMonique.
"I-Vrijland esekude kakhulu, kepha uma kunjalo, kunjalo, ngoba kuningi ukuhlukumeza emithonjeni yezokuxhumana". Ngiyavuma, kepha kuthiwani uma umbuso uchaza izincazelo zokuxhashazwa kanye nezitatimende ezisengozini? Kuthiwani uma kuvela ukuthi othile uphatheke kabi ngoba usho okuthile kumuntu ozizwa engathathi hlangothi ngokobulili, “Hawu, yeka umuntu ophikayo”Futhi ngubani oziveza njengowesifazane? Ngabe-ke uyajeziswa futhi kufanele uye enkantolo? Luzohamba kude kangakanani ucwaningo lombuso uma umbuso uqala ukuphazamisa inkulumo yethu?
"Ubugebengu benzondo" yigama lelo elakhelwe lokhu. Uma ukhuluma nomuntu ongabukeka njengentombazane emithonjeni yezokuxhumana no- 'she' noma 'wakhe', noma lokho kungenzeka ngengozi, lokho kungabonakala 'njengokuzonda ubugebengu' ngokuzayo. Kungenzeka yini ukuthi uBridget noDré bavunyelwe ukwenza indlela yokwamukelwa komthetho 'wenzondo yobugebengu'? Ngabe uBridget uzoza nobufakazi kungekudala, okukhombisa ukuthi uyahlukunyezwa ngamagama anjengalawo asetshenziselwa abantu besifazane abathola imali yabo ngendlela ethile?
Konke esikwaziyo kuhanjiswa ngezithombe ezinhle nezindaba kwabezindaba, kepha okungokoqobo kuvame ngaphandle kwalokho esikucabangayo.
Ukufakwa ohlwini kwezixhumanisi: telegraaf.nl
Ukuzicabangela okukhulu kunengozi enkulu kunokuba i-Facebook igxeke izindaba ezikhohlisayo
Incwadi entsha kaMartin Vrijland 'Okungokoqobo njengoba sikubona' kulungele ukulethwa!
Amathegi: André, ukwephulwa, Bridget, afakiwe, ubulili, haatspraak, inzondo, Izingozi, I-Maasland, social media, inkulumo, umthetho
20 February 2020 ku-10: 16
Ungathenga futhi abalandeli bakho inqobo nje uma iklayenti lakho linama-zeros namadada ngokwanele embhedeni
, lapho-ke unganikeza umbono othunyelwe (bese uthola imali futhi), futhi imali eyengeziwe yama-slides wezindaba 😉
20 February 2020 ku-14: 25
Lokhu kubukeka kimi njengesimo esingenabungane. Lababantu bayiziphukuphuku ngokweqile lokho.
20 February 2020 ku-18: 09
Kukhona onabaphathi nabaqondisi bakwa-Ellie 😉
« Amabhomu aseRussia abhubhisa izimoto zaseTurkey ezihlome ngezikhali eSyria, isimo salola kakhulu
Ngabe i-IVF nemijovo yokugoma iholele ezizukulwaneni zezingane ezithandanayo? »
Ukuvakashelwa okuphelele: 1.195.945
SandinG op ICoronavirus, Q Anon, uTrump, iBolsonaro, iBoJo, ukujula nokuvalwa kwe-inthanethi ngo-Ephreli 1?
Ikusasa op Ngabe abesilisa abangabathandana nabesilisa abathandana nobungqingili yibo okubhekiswe kubo ngokuyinhloko? Isisekelo sesayensi
Harry qhwa op I-Trump, Q-Anon kanye 'nokuhlanza inganekwane' (uRobert Jensen, uJanet Ossebaard)
Ikhamera ye-2 op Ngabe abesilisa abangabathandana nabesilisa abathandana nobungqingili yibo okubhekiswe kubo ngokuyinhloko? Isisekelo sesayensi
UFrank Holland op Ngabe abesilisa abangabathandana nabesilisa abathandana nobungqingili yibo okubhekiswe kubo ngokuyinhloko? Isisekelo sesayensi